၁။ အာဆင်နယ်အသင်းဟာ ဘယ်လ်ဂျီယံ ကွင်းလယ် တောင်ပံကစားသမား ယာနစ် ကာရက်စ်ကို ကို ပြောင်းရွှေ့ကြေး ယူရို သန်း ၃၀ (ပေါင် ၂၆ သန်း) + ထပ်ဆောင်း အပိုဆုကြေးငွေ ပေးချေပြီး ခေါ်ယူဖို့ ဆွေးနွေးနေတာဖြစ်တယ်လို့ အီတလီမီဒီယာ Sport Mediaset က အတည်ပြုဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ အဆိုပါ ပမာဏဟာ ဒါလီယန်း လီဖန်းအသင်းအလိုရှိတဲ့ ပမာဏဖြစ်ပြီး နှစ်ဘက်အသင်းအကြား ဆွေးနွေးမှုတွေဟာ တိုးတက်မှုရှိနေပြီး အပြောင်းအရွှေ့ကို အပြီးသတ်နေပြီဖြစ်တယ်လို့ Football London ကလည်း ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ အာဆင်နယ်အသင်းဟာ ကစားသမားနဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသဘောတူညီချက် ရရှိထားပြီးဖြစ်တာကြောင့် တရုတ်ကလပ်နဲ့ ဆွေးနွေးမှုတွေကို အပြီးသတ်ဖို့သာကျန်ရှိတော့တာဖြစ်ပါတယ်။
၂။ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ် အသင်းရဲ့ ဂိုးသမား ကေလာ နာဗက်စ်ဟာ သူ့ကို အသင်းက အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ကြေးနဲ့ ထွက်ခွာခွင့်ပြုဖို့ မျှော်လင့်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ နာဗက်စ်ဟာ လက်ရှိမှာ ၂ နှစ်ကျန်ရှိနေသေးပေမယ့် စာချုပ်ဖျက်သိမ်းပြီး အသင်းကနေ ထွက်ခွာချင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
၃။ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ နည်းပြအဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ မူလန်စတင်းက ယူနိုက်တက်အနေနဲ့ ရီးရဲလ်ကြယ်ပွင့် ဂါရတ် ဘေးလ်ကို ခေါ်ယူခဲ့မယ်ဆိုရင် အသင်းအတွက် အရမ်းကို အကျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့ တိုက်တွန်းပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ ဆာအဲလက်စ်ဖာဂူဆန်လက်အောက်မှာ လက်ထောက်နည်းပြအဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့တဲ့ မူလန်စတင်းက talkSPORT နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့မှုမှာ ယုခလို ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ “ထိပ်တန်းကစားသမားတစ်ဦးကို ခေါ်ယူဖို့ ပြောနေကြတာပါပဲ၊ ဒါပေမယ့် ဂါရတ်ဘေးလ်က သူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးပုံစံမှာ ရှိနေသေးရဲ့လား? ၊ သူက မကြာခဏဆိုသလို ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတတ်တဲ့ ကစားသမားဆိုတာ အားလုံးသိထားပြီးသားပါ၊ ဒါပေမယ့် အခြားတစ်ဖက်မှာလည်း ဘေးလ်က ယူနိုက်တက်အတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ ပြောင်းရွှေ့မှုတစ်ခု ဖြစ်လာမှာပါ။ သူက အင်တိုက်အားတိုက်ကစားနိုင်ပြီး လျင်မြန်မှုအပြည့်လည်း ရှိပါတယ်၊ ဂိုးဖန်တီးပေးနိုင်သလို ဂိုးလည်းသွင်းယူနိုင်ပါတယ်၊ အခုချိန်မှာတော့ သူ ဘယ်အသင်းကို ပြောင်းရွှေ့မလဲဆိုတာတော့ ပြောရခက်ပါတယ်” လို့ မူလန်စတင်းက ပြောခဲ့ပါတယ်။
၄။ ဂျူဗင်တပ်အသင်းဟာ ဂျီနီုအာအသင်းက နောက်ခံကစားသမား ခရစ္စတီယန် ရိုမဲရိုးကို ပြောင်းရွှေ့ကြေး ယူရို သန်း ၃၀ နဲ့ ခေါ်ယူလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဂျူဗပင်တပ်အသင်းဟာ အသက် ၂၁ နှစ်အရွယ် အဆိုပါကစားသမားကို လာမယ့် ၂၀၁၉-၂၀ ရာသီ တစ်ရာသီစာ ဂျီနိုအာအသင်းထံ အငှားပြန်ချထားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
၅။ ပီအက်စ်ဂျီကြယ်ပွင့် နေမာဟာ ပြင်သစ်မြေမှာ မပျော်မရွှင်ဖြစ်နေတယ်လို့ Goal က ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ ဘရာဇီးလ်ကြယ်ပွင့်ဟာ ဘာစီလိုနာအသင်းထံ ပြန်လည်ပြောင်းရွှေ့ခွင့်ရဖို့ မျှော်လင့်နေပြီး ပီအက်စ်ဂျီဘက်က အဆိုပါကစားသမားကို လက်လွှတ်မခံဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားတာကြောင့် အခက်တွေ့နေပါတယ်။
၆။ ရိုးမားအသင်းဟာ ရှက်တာဒိုးနက် နည်းပြ ပေါ်လို ဖွန်ဆီကာကို နည်းပြသစ်အဖြစ် ခန့်အပ်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ပေါ်တူဂီသားနည်းပြ ဖွန်ဆီကာဟာ ရိုးမားအသင်းနဲ့ ၂ နှစ်သက်တမ်းရှိတဲ့ စာချုပ် ချုပ်ဆိုခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
၇။ အီဒင် ဟာဇက်ကို လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးထားရတဲ့ ချယ်လ်ဆီးအသင်းဟာ ဗလင်စီယာအသင်းရဲ့ တောင်ပံတိုက်စစ်မှူး ဂွန်ကာလို ဂွီဒက်စ်ကို ပြောင်းရွှေ့ကြေး ယူရို သန်း ၇၀ နဲ့ ကမ်းလှမ်းခဲ့ပြီး အဆိုပါ ကမ်းလှမ်းချက်ဟာ ငြင်းဆန်ပယ်ချခံခဲ့ရတယ်လို့ Goal ရဲ့ သတင်းဖော်ပြချက်အရ သိရပါတယ်။ ချယ်လ်ဆီးအသင်းဟာ ကစားသမားသစ်ခေါ်ယူခွင့် ပိတ်ပင်ခြင်းခံထားရပေမယ့် အယူခံဝင်ထားတဲ့အသင်းဖြစ်ပြီး ဟာဇက်နေရာကို ဖြည့်ဆည်းဖို့ ကြိုးပမ်းနေ ပါတယ်။
၈။ စပါးနောက်ခံလူ ယန်း ဗာတွန်ဂန်က အသင်းဖော် အဲရစ်ဆင်တစ်ယောက် အသင်းကနေ ထွက်ခွာမသွားဖို့ မျှော်လင့်နေတယ်လို့ ထုတ်ဖော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ အဲရစ်ဆင်ဟာ စိန်ခေါ်မှုအသစ်တွေကို ရှာဖွေဖို့အတွက် လန်ဒန်ကလပ်အသင်းကနေ ထွက်ခွာတော့မယ်လို့ တရားဝင် ကြေညာထားသူဖြစ်ပြီး ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းထံ ပြောင်းရွှေ့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ နာမည်ကြီးနေပါတယ်။
၉။ မန်ချက်စတာ စီးတီးအသင်းက ကြယ်ပွင့် တောင်ပံကစားသမား လီရွိုင်း ဆာနေးက သူ့ရဲ့ အနာဂတ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မန်ယူ ဂန္တဝင် ဒေးဗစ် ဘက်ခမ်းနဲ့ ဆွေးနွေး အကြံဥာဏ်ရယူသွားဖို့ စိတ်ဆန္ဒရှိနေတယ်လို့ The Sun က ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဆာနေးကို ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းက ခေါ်ယူချင်နေပြီး ဆာနေးအနေနဲ့ ၂၀၀၃ ခုနှစ်တုန်းက မန်ယူအသင်းကနေ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းထံ ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့တဲ့ ဒေးဗစ် ဘက်ခမ်းရဲ့ အကြံဥာဏ်ကို ရယူချင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
၁၀။ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းဟာ ဘရာဇီးလ် ကွင်းလယ်ကြယ်ပွင့် အန်ဒရီယားစ် ပါရဲရားကို စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ Fox Sports က ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါသတင်းအရ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နည်းပြ အိုလီ ဂန်းနား ဆိုးလ်ရှားဟာ ပါရဲရားရဲ့ ခြေစွမ်းကို အထူးသဘောကျနေပြီး လေးနှစ်စာချုပ်သစ်နဲ့ ကမ်းလှမ်သွားဖို့ရှိနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဟာရဲယားအသင်းကနေ ထွက်ခွာသွားပြီဖြစ်တာကြောင့် ပွဲထွက်တစ်နေရာအတွက် မျှော်လင့်ချက် အားကောင်းနေတဲ့ ပါရဲရားအနေနဲ့လည်း မန်ယူအသင်းရဲ့ စာချုပ်သစ်ကို လိုလိုလားလား လက်ခံသွားဖွယ်ရှိနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
၁။ အာဆငျနယျအသငျးဟာ ဘယျလျဂြီယံ ကှငျးလယျ တောငျပံကစားသမား ယာနဈ ကာရကျဈကို ကို ပွောငျးရှကွေ့ေး ယူရို သနျး ၃၀ (ပေါငျ ၂၆ သနျး) + ထပျဆောငျး အပိုဆုကွေးငှေ ပေးခပြွေီး ချေါယူဖို့ ဆှေးနှေးနတောဖွဈတယျလို့ အီတလီမီဒီယာ Sport Mediaset က အတညျပွုဖျောပွလိုကျပါတယျ။ အဆိုပါ ပမာဏဟာ ဒါလီယနျး လီဖနျးအသငျးအလိုရှိတဲ့ ပမာဏဖွဈပွီး နှဈဘကျအသငျးအကွား ဆှေးနှေးမှုတှဟော တိုးတကျမှုရှိနပွေီး အပွောငျးအရှကေို့ အပွီးသတျနပွေီဖွဈတယျလို့ Football London ကလညျး ဖျောပွခဲ့ပါတယျ။ အာဆငျနယျအသငျးဟာ ကစားသမားနဲ့ ပုဂ်ဂိုလျရေးသဘောတူညီခကျြ ရရှိထားပွီးဖွဈတာကွောငျ့ တရုတျကလပျနဲ့ ဆှေးနှေးမှုတှကေို အပွီးသတျဖို့သာကနျြရှိတော့တာဖွဈပါတယျ။
၂။ ရီးရဲလျမကျဒရဈ အသငျးရဲ့ ဂိုးသမား ကလော နာဗကျဈဟာ သူ့ကို အသငျးက အလှတျပွောငျးရှကွေ့ေးနဲ့ ထှကျခှာခှငျ့ပွုဖို့ မြှျောလငျ့နတေယျလို့ သိရပါတယျ။ နာဗကျဈဟာ လကျရှိမှာ ၂ နှဈကနျြရှိနသေေးပမေယျ့ စာခြုပျဖကျြသိမျးပွီး အသငျးကနေ ထှကျခှာခငျြနတောဖွဈပါတယျ။
၃။ မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျအသငျးရဲ့ နညျးပွအဖှဲ့ဝငျဟောငျးတဈဦးဖွဈတဲ့ မူလနျစတငျးက ယူနိုကျတကျအနနေဲ့ ရီးရဲလျကွယျပှငျ့ ဂါရတျ ဘေးလျကို ချေါယူခဲ့မယျဆိုရငျ အသငျးအတှကျ အရမျးကို အကြိုးရှိလိမျ့မယျလို့ တိုကျတှနျးပွောဆိုသှားခဲ့ပါတယျ။ ဆာအဲလကျဈဖာဂူဆနျလကျအောကျမှာ လကျထောကျနညျးပွအဖွဈ တာဝနျယူခဲ့တဲ့ မူလနျစတငျးက talkSPORT နဲ့ တှဆေုံ့ခဲ့မှုမှာ ယုခလို ပွောဆိုခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ “ထိပျတနျးကစားသမားတဈဦးကို ချေါယူဖို့ ပွောနကွေတာပါပဲ၊ ဒါပမေယျ့ ဂါရတျဘေးလျက သူ့ရဲ့အကောငျးဆုံးပုံစံမှာ ရှိနသေေးရဲ့လား? ၊ သူက မကွာခဏဆိုသလို ထိခိုကျဒဏျရာရရှိတတျတဲ့ ကစားသမားဆိုတာ အားလုံးသိထားပွီးသားပါ၊ ဒါပမေယျ့ အခွားတဈဖကျမှာလညျး ဘေးလျက ယူနိုကျတကျအတှကျ ကောငျးမှနျတဲ့ ပွောငျးရှမှေု့တဈခု ဖွဈလာမှာပါ။ သူက အငျတိုကျအားတိုကျကစားနိုငျပွီး လငျြမွနျမှုအပွညျ့လညျး ရှိပါတယျ၊ ဂိုးဖနျတီးပေးနိုငျသလို ဂိုးလညျးသှငျးယူနိုငျပါတယျ၊ အခုခြိနျမှာတော့ သူ ဘယျအသငျးကို ပွောငျးရှမေ့လဲဆိုတာတော့ ပွောရခကျပါတယျ” လို့ မူလနျစတငျးက ပွောခဲ့ပါတယျ။
၄။ ဂြူဗငျတပျအသငျးဟာ ဂြီနီုအာအသငျးက နောကျခံကစားသမား ခရစ်စတီယနျ ရိုမဲရိုးကို ပွောငျးရှကွေ့ေး ယူရို သနျး ၃၀ နဲ့ ချေါယူလိုကျပွီဖွဈပါတယျ။ ဂြူဗပငျတပျအသငျးဟာ အသကျ ၂၁ နှဈအရှယျ အဆိုပါကစားသမားကို လာမယျ့ ၂၀၁၉-၂၀ ရာသီ တဈရာသီစာ ဂြီနိုအာအသငျးထံ အငှားပွနျခထြားသှားမှာဖွဈပါတယျ။
၅။ ပီအကျဈဂြီကွယျပှငျ့ နမောဟာ ပွငျသဈမွမှော မပြျောမရှငျဖွဈနတေယျလို့ Goal က ဖျောပွခဲ့ပါတယျ။ အဆိုပါ ဘရာဇီးလျကွယျပှငျ့ဟာ ဘာစီလိုနာအသငျးထံ ပွနျလညျပွောငျးရှခှေ့ငျ့ရဖို့ မြှျောလငျ့နပွေီး ပီအကျဈဂြီဘကျက အဆိုပါကစားသမားကို လကျလှတျမခံဖို့ ဆုံးဖွတျထားတာကွောငျ့ အခကျတှနေ့ပေါတယျ။
၆။ ရိုးမားအသငျးဟာ ရှကျတာဒိုးနကျ နညျးပွ ပျေါလို ဖှနျဆီကာကို နညျးပွသဈအဖွဈ ခနျ့အပျလိုကျပွီဖွဈပါတယျ။ ပျေါတူဂီသားနညျးပွ ဖှနျဆီကာဟာ ရိုးမားအသငျးနဲ့ ၂ နှဈသကျတမျးရှိတဲ့ စာခြုပျ ခြုပျဆိုခဲ့တယျလို့ သိရပါတယျ။
၇။ အီဒငျ ဟာဇကျကို လကျလှတျဆုံးရှုံးထားရတဲ့ ခယျြလျဆီးအသငျးဟာ ဗလငျစီယာအသငျးရဲ့ တောငျပံတိုကျစဈမှူး ဂှနျကာလို ဂှီဒကျဈကို ပွောငျးရှကွေ့ေး ယူရို သနျး ၇၀ နဲ့ ကမျးလှမျးခဲ့ပွီး အဆိုပါ ကမျးလှမျးခကျြဟာ ငွငျးဆနျပယျခခြံခဲ့ရတယျလို့ Goal ရဲ့ သတငျးဖျောပွခကျြအရ သိရပါတယျ။ ခယျြလျဆီးအသငျးဟာ ကစားသမားသဈချေါယူခှငျ့ ပိတျပငျခွငျးခံထားရပမေယျ့ အယူခံဝငျထားတဲ့အသငျးဖွဈပွီး ဟာဇကျနရောကို ဖွညျ့ဆညျးဖို့ ကွိုးပမျးနေ ပါတယျ။
၈။ စပါးနောကျခံလူ ယနျး ဗာတှနျဂနျက အသငျးဖျော အဲရဈဆငျတဈယောကျ အသငျးကနေ ထှကျခှာမသှားဖို့ မြှျောလငျ့နတေယျလို့ ထုတျဖျောဝနျခံခဲ့ပါတယျ။ အဲရဈဆငျဟာ စိနျချေါမှုအသဈတှကေို ရှာဖှဖေို့အတှကျ လနျဒနျကလပျအသငျးကနေ ထှကျခှာတော့မယျလို့ တရားဝငျ ကွညောထားသူဖွဈပွီး ရီးရဲလျမကျဒရဈအသငျးထံ ပွောငျးရှဖွေ့ဈလိမျ့မယျလို့ နာမညျကွီးနပေါတယျ။
၉။ မနျခကျြစတာ စီးတီးအသငျးက ကွယျပှငျ့ တောငျပံကစားသမား လီရှိုငျး ဆာနေးက သူ့ရဲ့ အနာဂတျနဲ့ ပတျသကျပွီး မနျယူ ဂန်တဝငျ ဒေးဗဈ ဘကျခမျးနဲ့ ဆှေးနှေး အကွံဉာဏျရယူသှားဖို့ စိတျဆန်ဒရှိနတေယျလို့ The Sun က ဖျောပွခဲ့ပါတယျ။ ဆာနေးကို ဘိုငျယနျမွူးနဈအသငျးက ချေါယူခငျြနပွေီး ဆာနေးအနနေဲ့ ၂၀၀၃ ခုနှဈတုနျးက မနျယူအသငျးကနေ ရီးရဲလျမကျဒရဈအသငျးထံ ပွောငျးရှသှေ့ားခဲ့တဲ့ ဒေးဗဈ ဘကျခမျးရဲ့ အကွံဉာဏျကို ရယူခငျြနတောဖွဈပါတယျ။
၁၀။ မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျအသငျးဟာ ဘရာဇီးလျ ကှငျးလယျကွယျပှငျ့ အနျဒရီယားဈ ပါရဲရားကို စာခြုပျသဈခြုပျဆိုတော့မှာဖွဈတယျလို့ Fox Sports က ဖျောပွခဲ့ပါတယျ။ အဆိုပါသတငျးအရ မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျနညျးပွ အိုလီ ဂနျးနား ဆိုးလျရှားဟာ ပါရဲရားရဲ့ ခွစှေမျးကို အထူးသဘောကနြပွေီး လေးနှဈစာခြုပျသဈနဲ့ ကမျးလှမျသှားဖို့ရှိနတေယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ဟာရဲယားအသငျးကနေ ထှကျခှာသှားပွီဖွဈတာကွောငျ့ ပှဲထှကျတဈနရောအတှကျ မြှျောလငျ့ခကျြ အားကောငျးနတေဲ့ ပါရဲရားအနနေဲ့လညျး မနျယူအသငျးရဲ့ စာခြုပျသဈကို လိုလိုလားလား လကျခံသှားဖှယျရှိနတေယျလို့ သိရပါတယျ။